မြန်မာကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို Artificial Intelligence အကြောင်း ဘယ်လိုသင်ပေးကြမလဲ? – Gniap
မြန်မာကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို Artificial Intelligence အကြောင်း ဘယ်လိုသင်ပေးကြမလဲ?
ဒီနေ့ ခေတ်မှာ မိဘတိုင်းလိုလိုက ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘာသာစကားပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) နည်းပညာကွန်ပျူတာပိုင်းမှာ တတ်မြောက်စေလိုတဲ့ စေတနာ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် သင်တန်းကျောင်းတွေလဲ အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်လာကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မဟုတ်တဲ့ အခြားသော နိုင်ငံတကာ မှာရော ဘယ်လို သင်ကြားမှုတွေ ၊ စိတ်ဝင်စားမှုနေသလဲ ။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ရဲ့ သင်ကြားမှု စနစ် ၊ အရင်းအမြစ်တွေကရော ဘယ်လို အခြေအနေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
An Hour of Code with Artificial Intelligence! ဆိုတဲ့ online webinar တခု တက်ရင်း ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးချင်စိတ် ဖြစ်မိတယ် ။ (Webinar ဆိုတဲ့ သဘောက ကျွန်တော်တို့ဆီက စာပေဟောပြောပွဲတွေနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးဆရာထက် နယ်ပယ်တရပ်ရပ် မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးတာကို online ကနေတဆင့် ကမ္ဘာတဝန်းက လူတွေက တချိန်ထဲမှာပဲ live နားထောင်တာမျိုးပါ။) ဒီတော့ ဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေအားလုံးက webinar slide တွေ၊ဆွေးနွေးမှုတွေကို အခြေခံပါတယ်ခင်ဗျ။
နိုင်ငံတကာ မိဘ တွေက သူတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အနာဂါတ်အတွက် Programming ရေးတတ်ဖို့ မဖြစ်မနေ တက်မြောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တွေးလာကြတယ်။ Programming (သို့မဟုတ်) Coding လို့ ပြောတဲ့ အခါမှာ အထူးပြုမှု မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ Web Development (Website တွေ ရေးဆွဲတဲ့ အပိုင်း) ၊ Mobile Development (ဖုန်း application တွေ ဖန်တီးတဲ့အပိုင်း) ၊ Game Development (ဂိမ်းရေးဆွဲမှု) – စသဖြင့် နယ်ပယ်မျိုးစုံ မှာ မိမိ ရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို မြေတောင်မြှောက်ဖို့ ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ (ဒီအလေ့အထ ကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ – အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးလိုမျိုးမှာလဲ မြင်လာရပါပြီ။)
ဒါပေမယ့် ဒီမှာ မရင်းနှီးသေးတဲ့ Artificial Intelligence (လူသားအသိဉာဏ်တု) – AI နယ်ပယ်မှာပါ ကလေးငယ်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာမှာ ကြိုးစားနေကြပါပြီ။
AI ကို သင်ကြားပေးဖို့အတွက် ဘယ်လို အရင်းအမြစ်တွေ ကို အသုံးပြုသလဲ?
CESR MOOCs – (csermoocs.adelaide.edu.au/available-moocs)
CESR ဆိုတာက အခု ကျွန်တော် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ online webinar ကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ သူတို့ ဆီမှာ ကလေးငယ်တွေကို AI နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ကြားပေးဖို့အတွက် မိဘ/ဆရာတွေကို ပညာပေးအစီအစဥ်တွေ ကို အခမဲ့ ထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ ။ သြစတေးလျနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေ သူတို့ဆီက ဆရာ/ဆရာမတွေအတွက် စီစဥ်ပေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် မည်သူမဆို ရယူ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ webinar တွေ / training တွေကိုလဲ online ကနေတဆင့် အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံက CESR က ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ‘စာသင်ခန်းများတွင် AI သင်ကြားခြင်း’ ဆိုတဲ့ အခမဲ့ training တစ်ခုပါ ။ email account ရှိရုံနဲ့ Register ပြုလုပ်ပီး အလွယ်တကူ သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Link မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
CESR AI Teaching Courses
CESR Blog – csermooc.blog (or) teachingai.blog
သူတို့ ရဲ့ CESR Blog မှာလဲ ကလေးငယ်များကို ဘယ်အသက်အရွယ် ၊ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်ကဲ့သို့ သင်ကြားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လဲ register ပြုလုပ်ပြီး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး AI လို့ ဆိုရာမှာလဲ အထူးပြု သင်ကြားရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ ရှိပါတယ်။ AI ဆိုတဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာမှ ခေါင်းစဉ်ခွဲငယ်လေးတွေ ရှိနေတဲ့ သဘောပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားလေ့ ရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေထဲမှာ Computer Vision နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရင်းအမြစ် (resource) တွေအကြောင်းကို ပထမဆုံး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ နည်းပညာ နဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတဲ့ မိဘများအတွက်တော့ Computer Vision ဆိုတဲ့ စကားလုံးအပေါ် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးမှု ရှိပါလိမ့်မယ်။
Computer Vision ဆိုတာက ဓါတ်ပုံ ၊ ပုံရိပ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ခန့်မှန်းတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ အလွယ် ပြောလို့ရပါတယ် ။ ဥပမာ – လူ ထောင်၊သောင်း၊သိန်း ဂဏန်း ရဲ့ မျက်နှာအနေအထား တုန့်ပြန်မှု ဓါတ်ပုံပေါင်းများစွာ ကို computer ထဲမှာ လေ့ကျင့်လိုက်ပြီး computer AI စနစ်အနေနဲ့ ဒီမျက်နှာတွေရဲ့ pattern ကို နားလည်စေပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ အသစ် ဓါတ်ပုံ တစ်ခု ကို computer ကို ပြရုံ နဲ့ ဒီ ဓါတ်ပုံပါ မျက်နှာက ပြုံးနေသလား / မဲ့နေသလား စသဖြင့် computer AI စနစ် ကို အလိုအလျောက် ခန့်မှန်းနိုင်တာမျိုး ။ ကျွန်တော် အခုလို စာနဲ့ ရှင်းပြတာကတောင် ဖတ်ရင်း ပိုရှုပ်သွားနိုင်သလား မသိဘူး ။ ဒီတော့ ကလေးငယ်များအတွက်ဆို Computer Vision ဆိုတာကြီးကို နားလည်အောင် ဘယ်လိုများ ရှင်းပြကြမလဲ ?
ဒီအတွက် Google က ထုတ်လုပ်ထားပြီး နိုင်ငံတကာ စာသင်ခန်းတွေမှာ မိတ်ဆက် အသုံးပြုတဲ့ အခမဲ့ tool တွေ ရှိပါတယ်။
Quick Draw – quickdraw.withgoogle.com
ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိ ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ ပုံတွေကို ကွန်ပျူတာက ဘယ်လိုများ မှန်/မှား ခန့်မှန်းလိုက်သလဲ ဆိုတာမျိုး တွေးလာစေအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုဖို့က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နဲ့ပဲ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ပေးတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကလေးငယ် နဲ့ အတူ မိဘ/လူကြီး ပါ ဘေးနားကနေ ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Google ကနေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ ‘AI Experiment’ tool တွေ အများကြီး ကျန်ရှိပါသေးတယ်။ https://experiments.withgoogle.com/collection/ai ကနေ တဆင့် သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကျန်ရှိနေတဲ့ အခြားသော Game တွေ Tool တွေကို မိမိ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အတူ ဆော့ကစားရင်း AI နည်းပညာ အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အင်တာနက်ဖိုးက လွဲရင် ထပ်ဆောင်း ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ AI ကို လေ့လာနိုင်မှာပါ ။
Teachable Machine – teachablemachine.withgoogle.com
ကလေးငယ်တွေကို ပုံဆွဲတဲ့ အဆင့် ကနေ ကိုယ်တိုင် computer AI စနစ် ကို train လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် advanced တစ်ဆင့် အတွက် ဒီ Teachable Machine ဆိုတဲ့ Tool ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပုံ၊ပုံရိပ်တွေကို စုဆောင်းပြီး computer AI ထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ result ရလဒ် ဘယ်လိုမျိုးတွေ ရနိုင်သလဲ ဆိုတာမျိုး မိဘ/လူကြီးနဲ့ အတူတူ စူးစမ်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ ဒီ ရလဒ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ သဘောတရားတွေ ၊ တွက်ချက်မှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကလေးငယ် ကို အသိပေးပြီး ဒီအရာတွေကို ဆက်ပြီး သိချင်ရင် ကျောင်းစာသင်ခန်းကနေတဆင့် ဆက်လေ့လာသွားလို့ရတယ် ဆိုတာမျိုး လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စာလဲ ရှည်နေပြီ မို့ ဒီနေရာမှာ ခဏ ရပ်ခွင့်ပြုပါ ။ နောက်ရက်တွေမှာ Natural Language Processing (NLP) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ AI Tool တွေ အကြောင်းကို ဆက်ဖော်ပြပါမယ်ခင်ဗျ ။
Tags: AIFree ResourcesSTEM